ကျနော့်အကျင့်က public holiday လိုရက်မျိုးအပြင်ထွက်လေ့သိပ်မရှိ လူရှုပ်တာကိုမကြိုက်
သို့သော် ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည် နောက်ဆုံးခုံတန်းရဲ့အရှေ့ခုံမှာလူတစ်ယောက်စာလွတ်နေသည်
သူနှင့်ရင်းနှီးစကအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်သတိရမိသည် ထိုစဉ်က သူသည် အသည်းပက်ပက်စက်စက်
၂နှစ်ကျော်ကြာသောအခါဘယ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားသည်မသိ သူ့ကောင်မလေး လင်နောက်လိုက်ပြေးသည်
“မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းသားကြီးရာ ငါ့မှာအသည်းလည်းကွဲသေး ပိုက်ဆံလည်းဆုံးသေး အိမ်ကအတင်းပေးစားလို့
မတတ်သာလို့ယူလိုက်ရပါတယ်ဆိုရင် ဘာပဲပြောပြောငါ့မှာအသည်းကွဲရတာသိက္ခာရှိသေးတယ် ခုဟာက ခိုးရာနောက်ကို
လိုက်ပြေးသွားတာတဲ့ အဲ့ထက်ဆိုးတာရှိသေးတယ် စောက်ကောင်မက လင်ရသွားတာတောင်ငါ့ဆီဖုန်းဆက်ပြီးပိုက်ဆံလှမ်း
“ရှိတယ်ဟေ့ ရှိတယ်…ကောင်းကြသေးရဲ့လားကွာ မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း ငါဘာကောင်ဖြစ်နေတော့မလဲ”
“မင်းဘာကောင်မှမဖြစ်ဘူးသူငယ်ချင်း....မင်းနွားပဲဖြစ်တယ် “ဝပ်ထိန်း”လို့အော်ပြီးတွေ့ကရ နွားမတွေကိုလိုက်ခွေ့ပေတော့
အသည်းကွဲနေပါတယ်ဆိုမှ ရင်ဝဖနှောင့်နဲ့ဆောင့်ကန်တာထက်ဆိုးသည့်ကျနော့်စကားကြောင့် ထိုသူငယ်ချင်းရှိုက်ကြီးတငင်
ငိုပါလေတော့သည် ကိုယ်နဲ့သက်တူရွယ်တူယောကျာင်္းတစ်ယောက် အချစ်အတွက်ဤကဲ့သို့တအိအိနှင့်ငိုနေသည်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရသဖြင့်ပထမတော့
နောက်တော့ အမြင်ကပ်လာသည် နောက်တော့ ခဲနဲ့ကောက်ထုချင်စိတ်ပေါက်လာလေတော့သည်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တအိအိနှင့်ရှိုက်ငိုနေသည်ကိုမြင်ရလျှင် သနားမိမည်သာဖြစ်သည်
ထို့ထက်ပို၍ ချော့မိလျှင်လည်း ချော့မိပေလိမ့်မည် ထို့ထက် ထို့ထက်ပို၍ သနားသဖြင့် မတော်တဆ ချစ်မိလျှင်လည်း
ချစ်သွားနိုင်ပေသည် ယခုကဲ့သို့ ကိုယ်လိုထူထူထောင်ထောင်ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကဤသို့ငိုသည်ကိုမြင်ရလျှင်ဖြင့်
သားကြီးတို့ အားကြီးစိတ်ဆိုး၏ :P
နောက်ပိုင်း ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အခင်ကြီးခင်ခဲ့ကြသည်မှာ ယနေ့တိုင်ပင်ဖြစ်တော့သည် ခုတော့သူကမြန်မာပြည်ပြန်တော့မည် ကျွန်ဇာတာကုန်ပြီထင်ပ...
“နင်သိထားဖို့က ယောကျာင်္းဆိုတဲ့အကောင်တွေက နှာဘူးချည်းပဲဟဲ့ရွေစင်ရဲ့”
ကျနော့်ခေါင်းမွေးများပင်ထောင်တက်သွားသည်။ Tom & Jerryကာတွန်းကားတွေထဲကလိုသာဆိုရင် ကျနော်သည်
“တိန်”ကနဲအသံမည်ပြီး ခေါင်းက ပုတ်လောက်ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကြမ်းလှချည်လားဟ..သိချင်စိတ်ကြောင့်ကျနော်လှည့်ကြည့်လိုက်မိရာ စောစောကအသံရှင်ဟုယူဆရသော အသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်မျက်နှာချင်းဆုံသည် ၎င်း၏ဘေးတွင်သူ့ညီမဖြစ်ဟန်တူသောကောင်မလေးတစ်ယောက် ညီမဟုယူဆရခြင်းမှာမျက်နှာချင်းဆင်ကြ၍ဖြစ်သည်
ရုပ်ကသူလိုကိုယ်လိုထဲက ဘာကြောင့်မသိ နှစ်ယောက်စလုံးသုန်မှုံနေကြသည်။
“ငါမပြောလိုက်ချင်ဘူး နင့်အကောင်ကဘာစောက်ဖြစ်ရှိလဲ လက်ကြောမတင်းလို့ဟိုသူဋ္ဌေးကဖြုတ် ဒီသဋ္ဌေးကဖြုတ်နဲ့
ခုလည်းသူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီမှာဂိန်နေတယ် နင်မို့လို့ဒီလိုအကောင်ကိုကြိုက်ရတယ်လို့အေ အမေမွေးထားတဲ့သမီးတွေထဲမှာနင်ဟာစောက်သုံးမကျဆုံး”
“အမကလည်း သူကစိတ်ရင်းကောင်းပါတယ် ညီမကိုလည်းသစ္စာရှိတယ် ကြင်နာတယ်”
“ကြင်နာတယ်ဟုတ်လား သူကြင်နာတော့နင်ဖင်နာပြီပေါ့ မိန်းကလေးဆိုတာတန်ဖိုးရှိရတယ်ဟဲ့
????နေရုံနဲ့ပြီးရောလား အဲလိုပဲလွယ်လား အလကားရလား ပေးရသေးတယ်ကမ်းရသေးတယ်ဟဲ့”
“အစ်မကလည်းသူအလုပ်အဆင်မပြေသေးလို့ပါ ဒါတောင်အလုပ်မရှိတဲ့ကြားက ညီမဖုန်းထဲကိုပိုက်ဆံထည့်ပေးသေးတယ်”
“ဘာရယ် ဖုန်းထဲပိုက်ဆံတစ်ဆယ်ထည့်ပေးတာကိုပြောဦးမလို့လား အောင်မယ်လေးမိရွေစင်ရယ် နင့်အမေပေးထားတဲ့???က
တစ်ဆယ်ပဲတန်သလား နင်မို့လို့ဒီလိုအကောင်မက်တယ် နှာခေါင်းကလည်းကြီးလိုက်တာ နှာဘူးလို့မပြောရဘူး ”
ဟိုက်…သွားပြီ သွားပြီ..အခြေအနေတွေဆိုးသထက်ဆိုးနေပြီ ထိုင်ခုံတစ်ခုသာခြားသဖြင့်အသံတွေက မကြားချင်မှအဆုံး
ဒီနေ့မှhand-freeလည်းယူမလာမိ မဟုတ်ရင် နားကြပ်လေးတပ်ပြီးသီချင်းသံတွေနဲ့အနောက်ကအသံကိုဥပေက္ခာပြုနေလိုက်လို့ရသည်။ ခုတော့…
ဖြစ်နိုင်ရင်ဖဝါးနဲ့သာနာလိုက်ချင်သည် ခက်တာကဖဝါးတွင်နားကမပါ ထို့ကြောင့် နာလက်စနားနဲ့ပဲဆက်နာနေလိုက်ရသည်။
“အစ်မကခုတော့ပြောပြီပေါ့ အရင်ကိုအောင်ကြီးနဲ့အစ်မလိုက်ပြေးတုန်းကရော ဟိုကမွဲလိုက်သမှဖွတ်ကတောင်ဘကြီးခေါ်ရမယ် ရုပ်ကလည်းရပ်ကွက်ထဲထီးစုတ်လိုက်ဝယ်တဲ့ကုလားကြီးလောက်တောင်မသားနားဘူး အိမ်ကမရမကပြန်ခွဲပြီး အခုထုံထုံအအ ကိုမျိုးနဲ့ပေးစားလိုက်လို့သာအစ်မခုလိုနေနေရတာမဟုတ်လား”
“ဟဲ့ကောင်မ နင်နောက်တစ်ခါဒီစကားပြော ကိုမျိုးသိသွားရင် နင့်ကိုငါအသတ်ပဲ”
“ဟာ….ဒီကောင်မ ငါလေ..တယ်…ဒီမှာငါပြောမယ်မိရွေဇင်ရဲ့ နင့်ရဲ့…..????????????????????????????
အရေးထဲ ဖုန်းကcallလာသဖြင့်လန့်သွားသည် တော်သေးတယ် ခေါ်တဲ့လူကအလွန်းဆိုတဲ့တရုတ်သူငယ်ချင်း
Residend evilအခွေသစ်ထွက်ရင်ဝယ်လာရန်လှမ်းမှာခြင်းဖြစ်သည် ကံကောင်းသဖြင့်ဖုန်းringtoneကမြန်မာသီချင်းကိုမနေ့ကမှတရုတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်နှင့်လဲထားမိသည် မြန်မာသီချင်းနဲ့ဖုန်းလာရင်ဟိုကသိတော့မည်
ကျော်သွားသည် လူကလျှော့မသွား နေရာပြောင်းဖို့လည်းခက်ပြန်လေသည် ထို့ကြောင့်အနောက်မှ ငယ်ကျိုးငယ်နာဖေါ်နေကြသောညီအစ်မနှစ်ဦး၏စကားသံကား
ကျနော်စိတ်ကူးထားတာကရိုးရိုးလေး မသိသလိုနေလိုက်မည် ခရီးဆုံးမှတ်တိုင်ရောက်တော့မသိသလိုဆင်းသွားမည်
ဒါပဲဖြစ်သည် သူတို့စကားသံများကိုဥပေက္ခာပြုပြီး ကားမှန်ပြတင်းမှတစ်ဆင့်အပြင်ကိုသာအာရုံစိုက်ငေးမောနေလိုက်သည်
မှတ်တိုင်တစ်ခုထပ်ရောက်ပြန်သည် ထုံးစံအတိုင်းဆင်းတဲ့လူကဆင်းသွားကြဆဲ တက်တဲ့လူကတက်လာကြဆဲ နေရာတွေကကြပ်ညှပ်နေဆဲ ကျနော်ကလည်း အကြည့်ကိုကားမှန်ပြတင်းပေါက်အပြင်ကိုထုတ်လွှတ်ထားဆဲ
“ဟေ့ရောင်သားကြီး အသက်ရှင်လျှက်တွေ့ရဝမ်းသာတယ်ကွာ ငါကမင်းရှောရှာပြီထင်နေတာ”
စောစောကမှတ်တိုင်ကနေကားပေါ်တက်လာပုံရသည် သွားကုန်ပြီဟုကျနော်သိလိုက်သည် မဟာအရှက်တွေကွဲကြကုန်ပြီဟုလည်းကျနော်သိလိုက်သည်
“ဒါနဲ့မင်းကိုပြောရဦးမယ်... ဟိုကောင်တွေစက်ရုံက သူဋ္ဌေးနဲ့ စာရေးမနဲ့ငြိကြတာလေ...အဲဒီနေ့ငါတို့အခန်းအပေါ်ကနေချောင်း......”
ကျနော်ကပြောလည်းပြော ကားမှန်အရိပ်မှတစ်ဆင့်ထိုညီအစ်မအားမသိမသာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရာ အသံများတိတ်ဆိတ်လျှက် မျက်နှာကိုယ်စီလည်းဆီးရွက်ပမာသာရှိကြတော့သည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေတော့သတည်း ။ ။
တော်တော်ရေးတတ်တယ်ဗျာ။ အိပ်ရင်းရေးတာတောင်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဆက်မျှော်နေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
လက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ သရုပ်ဖော်ဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာကလေးကိုတော့ အတော်သဘောကျမိတယ်။ ဒီအတွေးကလေးကောတ့ အတော့်ကို ကောင်းတယ်။
စာရေးကောင်းတယ်။ဖတ်လို့ကောင်းတယ်လို့ကိုယ်ယူဆတဲ့ ဘလော့ရေးတဲ့သူအချို့ရဲ့စာပိုဒ်ခွဲပုံကလေးကို အတူယူကြည့်ပါ။ အခုက စာတွေ ကအပြည့်ဖြစ်နေတော့ ဆွဲဆောင်မှူ အား. နဲနဲ နည်းတယ်။
နိုင်ငံခြား က ဘလော့ပိုစ်အချို့ကိုလည်း နဲနဲဖတ်ကြည့်ပါ။ စာတွေ အားလုံးကိုဖတ်ဘို့ မဟုတ်ဘူး။ အတွေးအခေါ်နဲနဲ ရမယ်။ သူတို့ ဘာတွေ ရေးတတ်သလဲဆိုတာ အတွေ့အကြုံရမယ်။ အမြင်သစ်ရမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံကို အိုင်ဒီယာ ရမယ်။ တင်ြ့ပု့ ကော်လန်ချပုံ့ကလေးတွေ ကြိုက်တာတွေ့၇င် မသိမသာ အတုခိုးဘို့ စုတုပြုဘို့
အပြင်မှာ ဒီလိုအဖြစ်တွေ ကြုံဖူးပေမဲ့ ကိုသားကြီး ရေးထားတာက ပိုပြီးဖတ်ကောင်းနေတယ်။ စောစောစီးစီး ရယ်မိသွားပါတယ် :)
ဟဟဟဟ ဖတ်ပြီးရယ်လိုက်၇တာ အဟိုးးအဟိုးးး အဟက် ခွီခွိးးး
သယ်ရင်း အရေးသားတွေကတော့တော်တော် ကောင်းတယ်
အကြည်တော် စာအုပ်ဖတ်နေရသလိုဘဲ တကယ်ပြောတာနော်
ပါးစပ်စည်းကမ်းရှိအောင် သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
Even if nobody can understand, I feel that these2sisters shouldn't speak out those rude words.
Our words will show our own personality....
ကံဆိုးချင်တော့ နုတ်ဆက်တဲ့သူက ရောက်လာသေး
ဒါမျိုးကျ မမေ့ဘူး... ဟားဟား ရယ်ရတယ်..ကိုကိုချစ် ကိုလဲ ပြောရအုံးမယ် သူက အော်ကျယ်အော်ကျယ် နဲ့ စကားပြောရင်း))